स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुले उपभोक्ता समिति गठन नै नगरी अनियमितता भएको आरोप र आवज उठन थालेको छ । निर्वाचनको क्रममा विकास र समृद्धिको नारा अगाडि सारेका जनप्रतिनिधिहरुले विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउने कोशिस पनि गरेका छन् । तर अपेक्षाकृत रुपमा भने परिणामा निकाल्न सकिरहेका छैनन् । स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको काम पारदर्शी हुनु पर्ने आवाज पनि उठदै आएको छ । रामेछापको रामेछाप नगरपालिकाभित्र पनि विकास निर्माणको काम धमाधम अगाडि बढेको छ । विकास निर्माणको काम पारदर्शी बनाउने गरी काम सुरु गरेको दावी रामेछाप नगरपालिकाका नगर प्रमुख नरबहादुर थापा मगरको छ । यसै विषयमा रामेछाप नगरपालिकाभित्र भएको विकास निर्माणको काम र आगामी योजना लगायतको विषयमा केन्द्रीत रहेर रामेछाप नगरपालिका नगर प्रमुख नर बहादुर थापामगरसँग रामेछाप न्युजको लागि राजन महतारा क्षेत्रीले गरेको कुराकानीः–
नगरपालिकाभित्र जनअपेक्षा अनुसार काम नएन भन्ने आरोप छ नि ?
रामेछाप नगरपालिकाभित्र कुनै पनि प्रकारको भष्टाचार हुन नदिन हामीले कार्यविधि अनुसार अगाडि बढेका छौ । उपभोक्ता समिती कार्यविधि अनुसार नै बनाएका छौ । विकास निर्माणको सबालमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेका छौ । अब नगरभित्रका प्रत्येक वडामा हामीले सार्वजिक सुनुवाइ गर्दै छौ । सुशासन कायम गर्नको लागि हामीले हरेक तहमा अनुगमन गर्ने गरेका छौ ।
तर सार्वजजनिक सुनुवाइमा नगरपालिकाका कर्मचारी भन्दा बाहेकका कोही पनि उपस्थित भएनन भन्ने नागरिकहरुको गुनासो छ । यही हो त पारदर्शीता ?
हैन, हामीले सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम हुँदै छ भनेर मिडिया मार्फत सुचना बजाएका थियौ । भुगोलको हिसाब अथवा भनौँ कामको व्यस्तताले नागरिकहरु उपस्थित हुन सक्नुभएन । अनि नगरका प्रत्येक वडामा सार्वजनिक सुनुवाइ भएको कारणले पनि नगरको सार्वजनिक सुनुवाइमा धेरै नागरिकहरु उपस्थित हुन नसक्नु भाको हो जस्तो लाग्छ ।